FeedBurner တွင်သင်၏ Feed ကိုမထည့်ပါနှင့် Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဧပြီ 11, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
မကြာသေးမီကကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဆိုက်တွင်၎င်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နေရာချထားမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အပြောင်းအလဲများသည်ကျွန်ုပ်၏ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်နေရာချထားမှု၌အချို့သောထပ်ဆင့်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ငါရှေ့ဆက်အဖြစ်ရလဒ်များကိုသင်နှင့်အတူမျှဝေဖို့ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ငါလုပ်မကြာသေးမီကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမှာဖြစ်ခဲ့သည် http://dknewmedia.com မွ http://martech.zone သို့မည်သည့်အသွားအလာကိုမဆိုလမ်းကြောင်းပြောင်းခြင်း။ www သည်ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ဖော်ပြသည်ကိုကျွန်ုပ်၏အဓိကဒိုမိန်းဖြစ်စေလိုသည်။ ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုမျိုးရှိမယ်ဆိုတာမသေချာဘူး၊ ငါတို့တွေ့လိမ့်မယ်။
ငါဒီနေ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်တယ် သင့်ရဲ့ feed ကိုပိုကောင်းအောင်အပေါ် Pilgrim စျေးကွက်ရှာဖွေရေး။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကသင်ဟာသင့်ကိုဘာလို့လဲဆိုတော့ထပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာအတွက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေကသင့်ကိုတကယ်အပြစ်ပေးမယ်ဆိုတာငါမသိခဲ့ဘူး RSS ကို အစာကျွေးသည်ထွက်သည်! သင်၏ဆောင်းပါးသည် noindex meta tag သည်သင်၏ feed တွင်ရှာဖွေခြင်းသည်သင်၏ feed page ကို indexing လုပ်ရန်တားဆီးလိမ့်မည်ဟုမှတ်ချက်ပြုသည်။
သေချာတာပေါ့, ငါအတွက် setting ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် FeedPress ဒါကိုခွင့်ပြုတယ်။ ဒီမှာပုံတစ်ပုံပါ NoIndex ကိုဖွင့်ပြီး setting များကိုသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။
Feedburner သည်ထူးခြားသောဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါများများသုံးလေလေ၊ ငါသဘောကျလေလေဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ဆိုဒ်တွင်တင်ထားသည့်စာမူများစွာကိုသင်၏ကွန်ရက်ထဲ၌ပေါင်းထည့်ပါလိမ့်မည်။ တစ် ဦး ချင်းအဆင့်ဆင့်အကောင်အထည်ဖော်မှု၌တည်ရှိ၏ E-မက်ထရစ် Blogging ငါရေးသားခဲ့သည်လမ်းညွှန်။
ဧပြီ 11, 2007 မှာ 6: 15 pm တွင်
အစွန်အဖျားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါအဲဒီမှာကြောင်း option ကိုသတိပြုမိဘူး။
ဧပြီ 11, 2007 မှာ 7: 18 pm တွင်
မင်းလောင်းတာလေ။ ငါတကယ်ကဒီနေ့အထိသတိပြုမိဘယ်တော့မှမ! Feedburner ဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်အသုံးဝင်တဲ့ကိရိယာတစ်ခုပါ၊
ဧပြီ 12, 2007 မှာ 8: 16 AM
ကျွန်ုပ်၏ Feedburner feeds ကိုပထမ ဦး ဆုံး configure လုပ်သောအခါထို option ကိုသတိပြုမိခဲ့သော်လည်း“ သေချာပါတယ်။ ဘာကြောင့် search engine တွေကိုကျွန်တော့် feed ကိုမဖော်ပြသင့်သလဲ၊
ဧပြီ 12, 2007 မှာ 8: 48 AM
ဧပြီ 12, 2007 မှာ 10: 11 AM
နောက်ထပ်အစွန်အဖျားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒေါက်ဂလပ်။ ငါချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် nofollow prechecked လုပ်ထားပေမယ့် activated မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့ကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။
ဧပြီ 12, 2007 မှာ 11: 33 AM
အစွန်အဖျားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါရွေးပြီးသားပါ၊ ဒါပေမယ့်ဘာကြောင့် (ဘယ်တော့မှတကယ်မကြည့်ခဲ့ဘူး) ဆိုတာမသိခဲ့ဘူး
ဧပြီ 12, 2007 မှာ 11: 48 AM
Hmmm, ဒီအင်္ဂါရပ်ကိုငါ့အစာကျွေးခြင်းအပေါ်ကိုသက်ဝင်ခဲ့သည်။ သူတို့ကပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သလား
ဧပြီ 12, 2007 မှာ 5: 43 pm တွင်
ဧပြီ 12, 2007 မှာ 9: 09 pm တွင်
ကောင်းသောတ ဦး တည်း Doug!
ထို့အပြင် robots.txt ကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏ feeds များကိုဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
ဧပြီ 12, 2007 မှာ 9: 11 pm တွင်
ဧပြီ 14, 2007 မှာ 5: 54 pm တွင်
သင် Technorati ရှာဖွေမှုတွင်ကောင်းစွာအဆင့်သတ်မှတ်သည် ဒါကမင်းဘလော့ဂ်ကိုနှစ်ကြိမ်တခါမတော်တဆတိုက်မိတဲ့နည်းပဲ။
ဧပြီ 14, 2007 မှာ 6: 09 pm တွင်
Thor ကြားရတာအရမ်းကောင်းတယ်။ ငါသည်သင်တို့၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်နိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်! ငါသည်လည်းသင်၏ဘလော့ဂ်ကိုကောင်းစွာစစ်ဆေးလိမ့်မည်။ ငါမှတ်ချက်ပေးရန်လုံလောက်သောကောင်းတဲ့လူတိုင်းနှင့်အတူလုပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။
ဧပြီ 16, 2007 မှာ 3: 02 AM
Feedburner သည် PR 8 site တစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်ထိုလင့်ခ်များသည်ကောင်းမွန်သောဖျော်ရည်ဖြစ်သည်။ ငါကလစ် - ခြေရာခံကစားသို့ကြွလာပုံကိုမသေချာဘူးသော်လည်း။
Jeroen က de Miranda
20:2010 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 3, 32
Việt Long ပလာဇာ
သြဂုတ် 20, 2011 မှာ 6: 04 AM